Gazette သတင်းဆင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Gazette သတင်းဆင်
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 22, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News | 15 comments
အန်အယ်လ်ဒီနှင့်ပေါင်းရန် အာချောင်မိသော ဦးရွှေမန်း ပါတီဗဟိုကော်မတီထံ ရှင်းရမည်ဟု ကြံဖွတ်လူမိုက် စွမ်းအားရှင် ဦးအောင်သောင်းမှ ကြိမ်းဝါးလိုက်သဖြင့် ၎င်းအိမ်မပြန်ရဲဒေါ့ဘဲ အမေရိကန်တွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းခံထားဂျောင်း သိရသည်။ ၎င်းတည်းခိုနေသော လိပ်စာမှာ 172, W. Palm Dr. Arcadia, CA 91007 USA Tel: (213) 422 2307 ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကျော်တိုင်းမ်စ် မဂ္ဂဇင်းဂျီး၏ အကြမ်းဖက် ဗုဒ္ဓဝါဒီအဖြစ် စွပ်စွဲခံထားရသူ ၉၆၉ဆရာတော် ဦးဝီရသူအား အမေရိကန် အစ္စလာမ်မစ် အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ်၊ ဩဇီ တာလီဘန် ဟာဂျီဖော၊ ဂျပန် ၇၈၆ အိုစမာ ဘင်လာဂီတို့မှ ဆော်ဒီနိုင်ငံ မက္ကာမြို့သို့ ဆိတ်ပြေလက်ပျောက် ဟာ့ဂ်ျဘုရားဖူးကြွရန် ပင့်ဖိတ်ထားကြောင်း ပါကစ္စတန် လေဂျောင်းလိုင်း အရာရှိ မူဂျာဟစ် မျှစ်ကြော်မှ သတင်းပေးပို့သည်။
မလေးရှားတွင် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ခံနေရသော ပြည်တော်ပျံမည့် မြန်မာများအတွက် ဂေဇက်သဂျီး ဦးခိုင်မှ စေတနှာ ရှေ့ထား၍ ကမ္ဘာတလွှား အောင်မြင်ကျော်ကြားနေသော မန်းလေးဂေဇက် ပုံနှိပ်သတင်းစာဂျီးအား အခမဲ့ ဖြန့်ဝေသွားမည်ဟု ကြေငြာသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်၌ ရေလွှာလျှောစီး ကစားနေသူ ဖားပြုတ်အောင်ပုနှင့် တာဝန်ကျရဲ ဦးကြောင်တို့ ဇကားများ ရန်ဖြစ်စဉ် အရက်မူးနေသော အောင်ပုမှ ဖင်လှန်ပြပီး နောက်လှည့်အထွက် ဦးကြောင်ကြီးမှ ခွီးဂနဲ ပြေးထိုးလိုက်ရာ ပေါက်သွားဂျောင်း မန်းလေးမြို့ အချုပ်တန်း ဆရာပေထံမှ သိရသည်။
မလေးရှားရောက် မြန်မာများ အကြမ်းဖက် အသတ်ခံရမှုအတွက် သံသယရှိသူစာရင်း မလေးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့ဂျီးမှ ထုတ်ပြန်ရာ ဂေဇက်ရွာမှ ဧဝဒီဂျီးဆိုသူ ပါဝင်နေပြီး ယူအက်စ်နိုင်ငံသား မာမွတ်ရှာပွတ်ခိုမ်နှင့် ဩဇီဂရင်းကတ် ကိုင်ဆောင်သူ မစ္စတာဖော တို့ကိုမူ နောက်ကွယ်သွေးထိုး လှုံ့ဆော်သူများအဖြစ် အင်တာပိုရဲအဖွဲ့မှ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားသည်။
မလေးရှားရောက် မြန်မာများ အသတ်ခံရမှုအတွက် သံသယရှိသူစာရင်း မလေးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့ဂျီးမှ ထုတ်ပြန်ရာ ဂေဇက်ရွာမှ ဧဝဒီဂျီး ပါဝင်နေပြီး ယူအက်စ်နိုင်ငံသား မာမွတ်ရှာပွတ်ခိုမ်နှင့် ဩဇီဂရင်းကတ် ကိုင်ဆောင်သူ မစ္စတာဖော တို့ကိုမူ နောက်ကွယ်သွေးထိုး လှုံ့ဆော်သူများအဖြစ် အင်တာပိုရဲအဖွဲ့မှ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားသည်။
မလေးရှားရောက် မြန်မာများအရေး မြန်မာ ဒုတိယနိုင်ငံဂျားရေးဝံကျီး ဦးဇင်ယော်နှင့် မလေးရှား ဒုတိယ နိုင်ငံဂျားရေးဝံကျီး ဟာဂျီပေါင်မုန့် ပင်လယ်ကမ်းခြေ တနေရာတွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
စက်ချို့ယွင်းမှု မကြာခဏ ဖြစ်နေသော မြန်မာ့လေဂျောင်းပိုင် တရုတ်လုပ် အမ်၆၀ လေယဉ်များအား ပျံသန်းခွင့် ယာယီပိတ်ပင် လိုက်သောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျားရိပ်သာလမ်းမှ မြို့ပြင် ရွှေပြည်သာသို့ လေယဉ်ဗျံစီး၍ လယ်စိုက်နေသော လယ်သမား ဖားပြုတ်အောင်ပု ထွန်ရေး မငင်နိုင်ရှိသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ် အထင်လွဲမှားနေမှုအား ဖြေရှင်းသည့် အခမ်းအနားကို ရန်ကုန် ဝိုင်အမ်စီအေခန်းမတွင် ကျင်းပစဉ် ဂေဇက်ဗလာဆရီ အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ်မှ လူဒိုင်းအား အေးချမ်းစေလိုဘာဂျောင်း အဲယားကွန်း စက်သစ်များဖွင့် ပြောသွားရာ တက်ရောက်လာသူများ ဖျားနာကုန်ဂျောင်း AKKOဆေးရုံအုပ် ပါရဂူဒေါက်တာ အီးဒုံးဂျီးမှ ပြောဆိုသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ အရေးပေါ် အခြေအနေ ဆိုက်နေသော လူနာများအား တရားရေအေး တိုက်ကျွေးခြင်း၊ သရဏဂုံတင်ပေးခြင်းတို့ကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ မိုးပြာဝါဒအတွက် ဂေဇက်သဂျီး သုဓါးမရွာစွာဦးခိုင် တရားဟောပုပ်ကိုယ် တာဝံယူဂျောင်း မသာအိမ် ဖဲဝိုင်းပွဲစား ဖားပြုတ်အောင်ပု သတင်းပေးပို့သည်။
မန်းလေးမြို့တွင် တရုတ်ဘာသာ ဆိုင်းဘုတ်ကြော်ငြာများ ပိတ်ပင်လိုက်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်သော ကျွန်းသစ်၊ ကျောက်စိမ်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဝယ်ယူတင်သွင်းမှု ရပ်ဆိုင်းမည် မဟုတ်ကြောင်း တရုတ်သံရုံး ပေါဂွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ကြေးမုံဂျီး (ခ) အီတွန့်ဗွမ်မှ ဂဏန်းပေါင်းစက်ခေါက်၍ ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပါတီနှစ်ခု ပေါင်းစည်းရန် မတူညီသည့် အချက်များ ဘေးဖယ်၍ ဘုံတူညီချက်ရှာမည်ဖြစ်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် သာမီးဂလေး ရတနာမိုင်ပုံရိပ် လွှမ်းမိုးနေဖွယ်ရှိဂျောင်း ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် မဟာမိတ် အက်စ်အက်စ်အေ ရှမ်းသဗုံ ဗိုလ်ချုပ်နွေတီးတီး ဟောကိန်းထုတ်သည်။
ဦးဦးမန်းကို မပြန်ရဲရင် မပြန်ပါနဲ့လို့။
ကျန်တဲ့သူတွေ ကျုတ်ကျက်လိ သွားပါလိမ့်မယ်လို့။
NDF ကို ထောက်ခံမယ့် လူတော်တော်များလာမယ် ထင်ပါရဲ့ ဗျာ
ကျုပ် လဲ ခမောက်ဆောင်းမယ်ဗျို့ 
ကမ္ဘာကျော်တိုင်းမ်စ် မဂ္ဂဇင်းဂျီး၏ အကြမ်းဖက် ဗုဒ္ဓဝါဒီအဖြစ် စွပ်စွဲခံထားရသူ ၉၆၉ဆရာတော် ဦးဝီရသူအား အမေရိကန် အစ္စလာမ်မစ် အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ်၊ ဩဇီ တာလီဘန် ဟာဂျီဖော၊ ဂျပန် ၇၈၆ အိုစမာ ဘင်လာဂီတို့မှ ဆော်ဒီနိုင်ငံ မက္ကာမြို့သို့ ဆိတ်ပြေလက်ပျောက် ဟာ့ဂ်ျဘုရားဖူးကြွရန် ပင့်ဖိတ်ထားကြောင်း ပါကစ္စတန် လေဂျောင်းလိုင်း အရာရှိ မူဂျာဟစ် မျှစ်ကြော်မှ သတင်းပေးပို့သည်။
လစ်ဘရယ် အယူရှိပါက ၇၈၆ ဂိုဏ်းဝင်ချည်းသာတည်းးးး
မိုင်လေးက ဘယ့်နှယ် ကယ်နိုင်မှာလဲ ဗျ ..
သတင်း ဆင် သာ ပြောဒယ် …
မိုင်လေးပဲ တွေ့ရဘာလား ….
ဒင်းက လူကို မျက်လုံးနဲ့တင် ညှို့နေတာ မဟုတ်ဘူး …
အနေအထားနဲ့ပါ ညှို့နေတယ် ….
ငါ … တယ် …
သ တင်း ပုလင်းတွေ လည်း ဖတ် ချင်
မိုင်လေး ကို လည်း . . . . . . . . လို့ 
အ ရောက် လာ သွား တယ် ဗျို့ 
အသုဘဟုခေါ်ဆိုသော ကမ္မဌာန်း ရှု့ရန်အလိုငှာ………
မိုင်လေးရဲ့ ပုံလေးကို ကူးယူထားလိုက်ပါတယ်ဗျ………..
ကိုကျော်သူလုပ်မည့် တရားအစီအစဉ်မှာ မိုးပြာဝါဒပိုင်ရှင်များအတွက် ဂေဇက်သဂျီး သုဓားမရွာစွာမှ တရားဟောပုပ်ကိုယ် ပြုလုပ်ပေးမည့် အစီအစဉ်ကို အလွန်သင့်မြတ်သည် ထင်ပါကြောင်း။ သူမှလွဲရင် ထိုရာထူးနှင့် သင့်တော်သူ မတွေ့သဖြင့် သူသာလျှင် အဖြစ်သင့်ဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း။ သေခါနီး မိုးပြာဝါဒီများလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှ တရားမင် ဆိုသည့်အတိုင်း သူ့တရားကို နာယူပြီး သူတို့မယုံကြည်သော အပါယ်လေးဘုံကို သူတို့မယုံကြည်သော နောက်ဘဝတွင် ခံစားခွင့် ရနိုင်မည် ထင်ပါကြောင်း
အ ရမ်း ဖတ် လို့ ကောင်း ပါ က လား ၊
ရယ် လည်း ရယ် ရ ပါ တယ် ခင် ဗျား ။
အိုး မိုင် ဆွိ
သူလုပ်မှပဲ ရှမ်းသူပုန်ဖစ်ရတော့တယ် ….
ကယ်မဲ့သူက မကယ်ခင် ပလပ်လန်နေဒယ်..
ဒါ ဦးကြောင် လက်ချက်ပဲနေမှာ